USB Drive ceeriin Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga ceeriin USB Drive v
> Resource > Flash Drive > USB Drive ceeriin Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga ceeriin USB Drive
Waxaan soo kaban karto, Faylal ay ka ceeriin USB Drive?
Waxaan leeyahay flash USB ah in aan lagu isticmaalaa muddo dheer. Shalay markii ay ahayd ayaan ku saabsan in la furo drive ee computer ayaa ii sheegay in aan anigu waxaan iyada u furi karaa. Markii aan u hubiyo hantida waxaa ka mid ah, waxaan helay drive aan USB ahayd 0 MB nidaamka file cayriin. Waxaa la rabay in lagu baruurta 32 nidaamka. Waxaa jira in badan oo files muhiim ah oo ku saabsan baabuur aan USB. Qof i caawin kartaa dib si aad u hesho files ii?
Si aad u USB flash drive, waxaad isku dayi kartaa in ay qaab. Laakiin ma noqon doonto mid aad u adag, haddii aad rabto in aad soo kabsado files ka ceeriin ah drive USB hor intaadan go'aansan inaad u qaab. Ilaa iyo inta files aad USB flash drive aan la overwritten by xog cusub, waxay u badan tahay inuu ka soo kabsado dhammaan faylasha lumay ka USB flash cayriin drive leh barnaamijka xogta flash drive USB cayriin ah aad.
Halkan waa talo: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac , a khatar la'aan iyo si sahlan loo isticmaalo barnaamijka u saamaxaya in aad ka bogsato ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee files ka USB drive cayriin, oo ay ku jiraan sawirrada, files audio, videos, dukumenti, iwm .
Connect aad drive USB cayriin la your computer iyo soo bixi version maxkamad barnaamijka Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado xogta ka cayriin drive USB hadda ah.
Faylal ay ka soo kabsadaan cayriin USB Drive in 3 Talaabooyinka
Haddaba isku dayno Wondershare Data kabano Windows in uu fuliyo soo kabsado. Users Mac karto soo kabashada in talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Select hab kabashada si ay u bilaabaan soo kabashada drive USB cayriin
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery on your computer, oo waxaad heli doontaa daaqad in bandhigayaa 3 hababka soo kabashada.
Halkan, aynu dooro "Mode Recovery File ceeriin ah" sida isku day ah oo hore.
Fiiro gaar ah: hab Tani aad qaadataa waqti badan oo aan ku tusi doono u magacyada file iyo waddooyinkiisa.
Tallaabada 2 Dooro drive USB cayriin in iskaan for files lumay waxay ku
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan "For All Files" doorasho uu furmo suuqa oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka.
Tallaabada 3 ceshano files ka cayriin drive USB
Ka dib markii iskaanka, dhammaan faylasha recoverable aad drive USB cayriin lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan files aad u baahan tahay oo ka dhacay on "Ladnaansho" button inuu ka soo kabsado iyo badbaadin files lumay on your computer.